Jụrụ System Ngwá Ọrụ Manufacturers - China Jụrụ System Ngwá Ọrụ Factory & Suppliers
BT0113 Jụrụ Sistem Mgbapu Mwepu & Mejupụta Kit
Nkebi nke: BT0113
Engine jụrụ System agụụ kpochapụ & mejupụta Kit Set
Agụụ Type Coolant Filling Function: Pneumatic agụụ coolant filler mbụ eme nzuzu na Nleta a agụụ na obi jụrụ usoro site na iji shop shop, mgbe ahụ na-adọrọ coolant n'ime obi jụrụ usoro. Tinye coolant na agụụ, e nweghị nnukwu ikuku n'akpa uwe ma zere warping ma ọ bụ ndị ọzọ na-emebi na engine. Dị ka ọ na-adị, ọ na-ewe 5-10mins iji mejupụta coolant ahụ, oge ziri ezi dabere na nha nke tank ahụ. Mfe iji rụọ ọrụ ma chekwaa oge.
BT9045 27pcs Master Cooling Radiator Pressure Tester na agụụ mkpochapụ na mejupụta Kit
Nkebi nke: BT9045
27pcs Master Jụrụ Igwe Redio Nrụgide Nyocha na agụụ Mwepu na mejupụta Kit
Multifunction: Ntọala ahụ bụ ihe niile dị na ngwongwo akụrụngwa zuru ezu, gụnyere nchọpụta nyocha, mmụba okpomọkụ na ọrụ ndozi coolant. Onye na-enyocha mgbapụta aka na-agbanye mmiri, na-eche maka pointer dobe oge iji kwado usoro ahụ. Pneumatic agụụ filler mbụ eme nzuzu na Nleta a agụụ na obi jụrụ usoro site na iji shop ụlọ, mgbe ahụ na-adọta coolant n'ime usoro. Tinye coolant na agụụ, e nweghị nnukwu ikuku n'akpa uwe ma zere warping ma ọ bụ ndị ọzọ na-emebi na engine.
Jaguar, Land Rover Fan Clutch Ngwá Ọrụ Set
* Anọchi ofufe ipigide nzukọ na Land Rover ugbo ala.
* Extra ogologo na mkpa e mere maka mfe na-arụ ọrụ na warara ohere.
* Ogologo: 650mm.
* Size: 36mm, 40mm
Nkebi Nke Sep.
BT 544 36mm & 40mm
10pcs Fan ipigide spana Set
Nkebi Nke :: BT5429
1. Enye ohere maka mfe mwepụ nke ofufe clutches mgbe idozi ma ọ bụ dochie mmiri nfuli, oge n'agbụ ma ọ bụ ofufe ipigide.
2. Square draịva maka ojiji na a breaker mmanya maka ọzọ torque.
3. Maka iji gị Ford, GM ma ọ bụ Chrysler
21PCS Cooling System & Radiator Cup Pressure Nyocha
Nkebi nke: BT0115
1. Chọta sistemụ mmiri si: Head gasket, Header tank, Radiator na kpo oku ọkụ, Ihe mgbapụta mmiri, hoses na ụlọ;
2. Ngwa ngwa-ntọhapụ ngwa ngwa na mgbapụta dị elu nke nwere nnukwu oku dị mfe ịgụ na kit a;
Petrol & Diesel Engine Pressure nlele nlele
Nkebi nke: BT0114
1. Imepụta iji chọpụta ngwa ngwa ma ọ bụ na-agbaze valvụ, pistons yiri mgbaaka na isi gaskets.
Nrụgide nrụgide: 80mm na dayameta; Ogwe 6.8 ma ọ bụ 100psi.
100cm ogologo sooks na ngwa njikọ na mgbali regulator
Nyochaa na nkwụnye 1 M14 x 1.25 na M18 x 1.5mm
Mmanụ ụgbọala Kwụpụ Ngwá Ọrụ Set
* Mee ngwa ngwa na ngwa ngwa wepu ikuku na ikuku na-ewepu akwa akwa ọbụna na ike iru ebe.
Set gụnyere 7/8 ″, 3/4 ″, 5/8 ″, 1/2 ″, 3/8 ″, & 5/16 ″ nha ịnabata ọtụtụ ngwa.
Mmanụ na AC Line Spring njikọ Ngwá Ọrụ
* Na-ekewapụ ngwa ngwa njikọta njikọta mmiri na ahịrị mmanụ na sistemụ ikuku na 1981- ugbu a ụgbọala Ford na Chrysler LH
* Nha: 3 / 8in., 1 / 2in., 5 / 8in.na 3 / 4in.
Fuel Line Ndenye Kwụsị Ngwá Ọrụ
* N'ihi na ngwa ngwa na mfe mmanụ ụgbọala nyo nnọchi mgbe na-arụ ọrụ na ugbo ala na ngwa ngwa disconnecct-style oyiyi akwa na 5 / 16in. na 3 / 8in. ahịrị mmanụ: GM-ugbu a GM; 1990 ugbu a Ford; 1990-ugbu a (ụdị ụfọdụ) Ford.